Isifuba Somoya Sasebusuku - Ipulatifomu Yesiguli Yomhlaba Wonke
Isifuba Somoya Ebusuku: Izimbangela, Izimpawu, Ukwelashwa nolwazi oluthe xaxa
Ikhaya>Siyini Isifo Somoya?>Isifuba Somoya Ebusuku: Izimbangela, Izimpawu, Ukwelashwa nolwazi oluthe xaxa
Isifuba Somoya Ebusuku: Izimbangela, Izimpawu, Ukwelashwa nolwazi oluthe xaxaIpulatifomu Yesiguli Yomhlaba Wonke Nesifo Somoya2021-03-10T13:19:33+01:00
Uma une-asthma, ungaqaphela ukuthi izimpawu zakho zimbi kakhulu ebusuku - awuwedwa. Abantu abangaphezu kwezigidi ezinhlanu e-UK bane-asthma kanye ne-asthma ye-night-time, eyaziwa nangokuthi i-asthma yasebusuku, kucatshangwa ukuthi ithinta kuze kube yizingxenye ezintathu zazo.
Izimpawu zesifuba somoya sasebusuku zifaka phakathi ukukhwehlela, ukuqina esifubeni, ukuhefuzela nokuphefumula ngaphambi nje naphakathi kokulala. Abagulayo bangavuswa kaningana, okuholele ekukhathaleni, ukugxila kokungakwazi ukusebenza kahle kanye nobunzima bokulawula izimpawu zesifuba somoya emini, kubantu abadala nasezinganeni. Lokhu kungaba nomthelela omkhulu kwikhwalithi yempilo.
Ukufa okuningi okuhlobene nesifuba somoya nokuhlaselwa okunzima kwenzeka ebusuku, ngakho-ke i-asthma yasebusuku yisimo esibi esidinga izinyathelo zokuvimbela nokwelashwa okusebenzayo. Isizathu esiqondile sokuthi kungani i-asthma ingaba yimbi kakhulu kwabanye abantu ebusuku asicaci yize izici ezithile kucatshangwa ukuthi zidlala indima futhi kunezinto ongazenza ukunciphisa ubungozi bakho.
Izimbangela nezimbangela zesifuba somoya sasebusuku
Akwaziwa kahle ukuthi kungani isifuba somoya sibi kakhulu ebusuku kwabanye abantu, yize kunezici ezithile ezingenza ukuhlaselwa yisifuba somoya ebusuku kube lula kakhulu. Izimbangela zokuhlaselwa yisifuba somoya ebusuku yilezi:
Indawo yokulala. Izikhundla ezithile zokulala, njengokulala ngohlangothi lwakho noma ngaphambili, zinganciphisa amaphaphu akho, okungenza izimpawu zesifuba somoya ebusuku ziba zimbi kakhulu. Okwamanje, ukulala phansi emhlane kungadala ukuthi amafinyila emakhaleni akho aconsele emuva komphimbo wakho futhi aqale ukukhwehlela ebusuku.
Ukuphefumula emoyeni obandayo. Igumbi elipholile lingcono ukulala kepha i-asthma yakho yesikhathi sasebusuku ingaba yimbi kakhulu ebusika noma uma ulala egumbini elinomoya opholile. Lokhu kungenxa yokuthi umoya obandayo womile - ukulahleka komswakama nokushisa ezindleleni zomoya kungadala ukuhlaselwa yisifuba somoya.
Ukuvezwa kwama-allergen ebusuku. House izidakamizwa ku-b yakhoeddingquza noma umantilasi, nesilwanyane sesilwane esifuywayo, izinhlayiya zothuli noma isikhunta egumbini lakho lokulala konke kungacasula imigwaqo yakho yomoya futhi kukwenze uthambekele kakhulu esifuba somoya sasebusuku.
Ukuvezwa kwama-allergen kusihlwa. Ukuvezwa yizilonda kusihlwa, kusuka kwimpova kuya ezinweleni zezilwane, kungadala impendulo ebambezelekile noma 'yesigaba sekwephuzile' Ungase uhlangane nokuvinjelwa komoya amahora ambalwa kamuva, kwandise ingozi yakho yokuhlaselwa yisifuba somoya phakathi nobusuku.
Isifuba somoya sosuku esilawulwa kabi. Ukungalandeli uhlelo lwakho lokwelashwa yisifuba somoya kahle emini kungakubeka engcupheni enkulu yokuhlaselwa yisifo somoya sasebusuku.
Umsebenzi wamaphaphu uyashintsha. Izinqubo zomzimba zemvelo ngesikhathi sokulala zingakwenza ukuthi uthambekele kakhulu ku-asthma yasebusuku. Umsebenzi wamaphaphu ngokwemvelo uphansi ebusuku. Njengoba imisipha iphumula ngesikhathi sokulala, umoya womoya ongaphezulu uyancipha futhi uholele ekumeni okwandayo emaphashini. Lokhu kusho ukuthi kungenzeka ukuthi ubhekane nobunzima bokuphefumula futhi ukukhwehlela kukufanele ebusuku.
Izinguquko zehomoni. Ngesikhathi sokulala, umzimba wakho uhamba ngezinguquko ze-hormonal ezingenza i-asthma yakho ibe yimbi nakakhulu. Abanye izifundo, isibonelo, kubonise ukuthi amazinga anciphisiwe e-cortisol ngesikhathi sokulala afaka isandla ekuvinjelweni komoya.
Izimpawu ze-asthma ebusuku
Izimpawu ze-asthma zenzeka lapho umoya uvuvukala futhi unciphisa ukwenza ukuphefumula kube nzima. Izimpawu zesifuba somoya ezijwayelekile ebusuku:
Ngaphezu kwalokho, eminye imiphumela ye-asthma yasebusuku kubantu abadala nasezinganeni ifaka:
Ukuntuleka kokuhlushwa emini
Ukulala ngokweqile emini
Kunzima ukulawula izimpawu zesifo somoya sasemini.
Uma unezimpawu zesifuba somoya ebusuku, kodwa ubungakaze ube nazo kutholakala ukuthi unesifo somoya, kufanele ubone udokotela noma umhlengikazi onguchwepheshe. Uma uthola ukuthi unesifo, kufanele uqiniseke ukuthi izinto ezingadala ukuthi kube nesikhathi sasebusuku zibhekiswe ohlelweni lwakho lwe-asthma.
Amaqembu athile abantu abane-asthma asengozini enkulu yokuthola i-asthma yasebusuku ngenxa yezici ezithile zobungozi ezibandakanya:
Isisindo eseqile esifubeni nasesiswini singaqinisa amaphaphu ngenkathi izicubu ezinamafutha zikhiqiza izinto ezivuthayo ezingathinta ukusebenza kwamaphaphu. Abanye izifundo sibonise abantu abane-asthma abalahle isisindo sebenze ngcono ukusebenza kwamaphaphu ebusuku.
Ukubhema kulimaza amaphaphu akho futhi kuzokukwenza uthambekele kakhulu kwizimpawu zesifuba somoya kubandakanya ukuhlaselwa yisifuba somoya ebusuku.
I-allergen rhinitis. Ucwaningo oluthile lwathola ukuthi ukwelashwa okungalungile kwe-rhinitis yokungezwani komzimba kwakuxhunyaniswe nokwanda kwama-50% ezimpawu zesifo somoya ebusuku. Lesi simo senza ukuthi amafinyila amaningi aqoqeke ngesikhathi sokulala futhi lokhu kucasula umphimbo, okungadala ukukhwehlela kokulingana.
I-Sinusitis ixhunyaniswe nezimo ezinzima kakhulu ze-asthma. Isimo, uhlobo lokutheleleka ngegciwane ezonweni, sibangela ukuphuma kwamakhala okungakhulisa i-asthma yakho lapho ulele futhi kukuvuse ngesidingo sokukhwehlela.
Ukuvimbela ukuphefumula kokulala (OSA). Ngalesi simo, imisipha yomphimbo iyakhululeka ngesikhathi sokulala, ivimbela izindlela zomoya, kanti ucwaningo lukhombise ukuxhumana phakathi kwe-OSA ne-asthma yasebusuku.
Reflux ye-Acid. Abantu abane-asthma banamathuba aphindwe kabili okuthuthukisa uhlobo lwe-acid reflux engapheli evuka ebusuku, eyaziwa njengesifo se-reflux se-gastroesophageal (GERD). Enye inkolelo ithi i-acid reflux ingadala ukuthi i-bronchial spasm yenze kube nzima ukuphefumula futhi lokhu kubi kakhulu uma ulala phansi.
Yize ubufakazi bungakahlangani, olunye ucwaningo lukhombisa ukuthi ingcindezi ibangela ukuphendula kwamagciwane okungahle kuvuse imigwaqo yomoya, okuholele ekwandeni kwamathuba okuhlaselwa kwabantu abane-asthma.
Ungayinqanda kanjani i-asthma yasebusuku
Yize lungekho ikhambi lesifuba somoya, kunezindlela eziningi zokusiza ukuvimbela isifuba somoya sasebusuku namakhambi okunqanda ukukhwehlela kwesifuba somoya ebusuku. Izeluleko zokunciphisa izimpawu ze-asthma yasebusuku yilezi:
Gcina imvelo yakho yokulala ihlanzekile futhi ingenawo amagciwane. Ungavumeli izilwane ezifuywayo egumbini lakho lokulala; geza ilineni lokulala njalo endaweni eshisayo ukuze ususe izibungu zasendlini; umoya ekamelweni lakho futhi uphathe noma isiphi isikhunta ezindongeni; gwema ukusebenzisa ama-duvet nemicamelo enezimpaphe.
Lawula izinga lokushisa kwekamelo lokulala ebusuku. Qiniseka ukuthi amawindi avaliwe, gwema ukufakwa umoya futhi utshale imali ekuhlanzeni umoya ukuze uthole umoya osezingeni eliphezulu ekamelweni lakho.
Phatha izimo ezingaphansi: Uma uhlushwa yisimo esingaphansi kwe-GERD, i-allergen rhinitis noma ukuvimbela ukuphefumula kokulala, qiniseka ukuthi uthatha izinyathelo zokuyelapha nokuyilawula. Ucwaningo lukhombisa, isibonelo, ukuthi abantu abathatha imishanguzo ye-GERD banokuhlaselwa okuncane kwesifuba somoya kanye nezimpawu zesifuba sasebusuku. Thatha imithi efanelekile kanye nezinyathelo zokuphila ezifana nezinguquko ekudleni ukuze unciphise i-acid reflux.
Gcina i-reliever inhaler yakho eduze. Gcina i-inhaler yakho eceleni kombhede wakho ukuze ukwazi ukuyisebenzisa uma unokukhwehlela ebusuku.
Gcina amanzi eduze kombhede wakho. Sipha amanzi lapho izimpawu zakho ziqala ukuqhuma. Umswakama uzodambisa imimoya futhi kukusize ukudambisa ukukhwehlela kwakho kwesikhathi sasebusuku.
Ukuzivocavoca umoya. Different izindlela zokuphefumula asetshenziselwa ukunciphisa izimpawu ze-asthma futhi angakusiza ukumisa ukukhwehlela kwesifuba somoya ebusuku. Uma uvuka ukhwehlela, ungazama ukuzivocavoca ukuphefumula ukusiza ukulawula ukukhwehlela kwakho.
Yenza isibuyekezo se-asthma ne-GP yakho noma umhlengikazi wokuzijwayeza. Bangabheka ukuthi usebenzisa ama-inhalers akho kahle futhi baxoxe nganoma yiziphi izimbangela ze-asthma yakho yasebusuku.
Landela uhlelo lokwelashwa kwesifuba somoya. Gcina i-asthma yakho ilawulwa ngokusebenzisa imishanguzo yakho ngokufanele, ulandelele izimpawu zakho, ulandela uhlelo olusebenzayo lokwelashwa kwesifuba nokulungisa imishanguzo uma kudingeka, ngeseluleko sikadokotela wakho.
Gcina isisindo esinempilo. Yidla ukudla okunomsoco nokuzivocavoca umzimba ukuze ugcine isisindo sakho silawulwa.
Yisiphi isikhundla esihle kakhulu sokulala nesifo somoya?
Ukunciphisa ezinye zezimpawu zakho ze-asthma ebusuku kungaba lula njengokushintsha indawo yakho yokulala. Ucwaningo oluthile lwathola ukuthi indawo yokulala ephezulu (ilele ngomhlane) ithuthukise izimpawu zesifuba somoya ebusuku futhi inciphisa amaphaphu akho kunokulala ngesisu noma ohlangothini.
Indawo ekahle yokulala yeziguli zesifuba somoya ukuzisondeza ngemicamelo eyengeziwe. Lokhu kuzosiza ukugcina imigwaqo yomoya ivulekile futhi kwehlise nengozi yakho yokukhwehlela ebusuku.
Ukwelashwa kwe-asthma ebusuku
Alikho ikhambi le-asthma yasebusuku, yize kunezindlela zokwelapha ukuze lisilawule. Xoxa ngezimpawu zakho nodokotela wakho noma umhlengikazi wesifuba somoya futhi bazokwazi ukukuncomela uhlelo lokwelashwa olungcono kakhulu. Ukwelashwa kwe-asthma yasebusuku kungabandakanya:
Vimbela i-inhaler. Lokhu kuletha umthamo womuthi we-steroid owuphefumulayo ukuze unciphise ukuvuvukala nokuvuvukala ezindleleni zomoya. Ukusebenzisa i-inhaler yokuvimbela njalo kwakha ukuvikelwa ukuze ungazweli kakhulu ezintweni ezibangela. Ukulawulwa kahle kwesifuba somoya kwakho ngesikhathi sasemini kuzonciphisa ukuqhuma ebusuku.
I-Reliever inhaler. Lokhu kuveza umthamo womuthi osebenza ngokushesha njenge-salbutamol ozovula imigwaqo yomoya futhi usize ukuqeda izimpawu zesifuba somoya sasebusuku. Yigcine eceleni kombhede wakho ukuze ukwazi ukuyisebenzisa ngokushesha lapho uhlaselwa ebusuku.
Inhalers yenhlanganisela. Uma amanye ama-inhaler akho engakusizi, ungadinga i-inhaler ehlanganayo exuba umuthi futhi iyeke izimpawu ezenzeka ngenkathi inikeza nokukhululeka uma kwenzeka.
Abaphikisi beLeukotriene Receptor (LTRAs). Lo muthi unikezwa ngohlobo lwethebhulethi futhi kwesinye isikhathi usetshenziselwa ukwengeza ama-inhalers ukusiza ngezimpawu ezinzima zesifuba somoya nokuhlaselwa isikhathi sasebusuku.